Accueil > Gazetin'ny nosy > Betafo: Mijaly ny mponina amin’ny fahatapahan’ny rano
Betafo: Mijaly ny mponina amin’ny fahatapahan’ny rano
Miaina anaty fijaliana ny mponina amin’ny fokontany efatra ao Betafo. Nanomboka tamin’ny 28 oktobra lasa teo mantsy no tapaka ny rano any an-toerana.
Miala 2km ny « borne fontaine » vao mahita rano ampiasaina ny mponina.
Ny antony nanapahana ny rano dia noho fampidirana rano ho an’ny olona miisa 400 eo an-toerana izay efa nisoratra anarana sy voalaza fa nandoa vola ka voatery notapahana ny rano hanatontosana ny fanamboarana. Raha araka ny fifanarahana nisy dia iray alina ariary ihany ny vola tokony naloan’ireo mponina hampiditra rano nefa nisy ny fiovana ka mila mandoa enina alina ariary ireo nisoratra anarana izay vao mahazo « compteur ». Marihina fa « compteur » efa niasa no omena azy ireo. Araka ny nambaran’ ireo tompon’andraikitra ao amin’ny fiarovana ny zon’ny mpanjifa dia nolazaina fa maimaim-poana ny fanomezana ireo « compteur » nefa izao lasa andoavam-bola enina alina ariary izao indray nefa toa tsy hita akory izay asa vita fa ny vahoaka fotsiny no mijal. Iaraha-mahalala ihany koa ny fahasarotam-piainana etsy andaniny.
Toa lasa “chantage” arak’izany ny fandoavana io vola io satria izay mahaloa ihany no mahazo ny “compteur” hatreto. Izany indrindra no mahatonga ny mpiaro ny zon’ny mpanjifa mandray an-tanana ity raharaha ity satria mijaly ny mponin’i Betafo ka mila averina faran’izay haingana ny rano. Nametraka taratasy teny amin’ny kaominina ihany koa izy ireo mangataka ny mba hisian’ny fivorian’ny kaomity iarahana amin’ny tompon’andraikitra maro samy hafa amin’ity raharaha ity toy ny talem-paritra ny rano, ny ministera, ny prefektiora, izany no natao mba hitadiavan ireto mpiaron ‘ny zon’ny mpanjifa ny marina amin’ity raharaha ity satria betsaka loatra ny tsy mangarahara amin’ity raharaha toy ny tsy mba fangatahana ny hevi-bahoaka , mahakasika ny vola fanampian’ny ONG hanatsarana ny sehatra ny rano nefa toa tsy misy raharaha vanona akory hatramin’izao. Aiza ny fahamarinana sy fijerena akaiky izao manjo ny mponina any Betafo izao?Mmisy ve ny vahaolana ho raisin’ny tompon’andraikitra manoloana izao zava-misy izao?
Raha araka ny fantatra dia ny 15 novambra lasa teo no lazaina ahavitana sy hamerenana ny rano. Inona no vahaolana noraisin’ny manam-pahefana mandritr’izay fotoana izay ka hatramin’io fotoana voalaza io fa mijaly sy mihatra aman’aina ity fahatapahan-drano ao Betafo ity? Samy mila rano ny tsirairay amin’ny fiainana andavanandro. Ahiana mafy ny hirongatan’ny valan’aretina pesta ao Betafo raha tsy misy ny fandraisana andraikitra faran’izay haingana.
Hatramin’izao tsy mbola vita ny asa. Miantso ny tompon’andraikitra hijery akaiky izao raharaha izao ireo mponina fa mijaly tsy misy mihaino.